संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको तीब्र आलोचना,मागियो राजीनामा – KhojPatrika
प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिविचारसमाचार
संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको तीब्र आलोचना,मागियो राजीनामा
By खोज पत्रिका	 March 19, 2021 0
काठमाडौं । पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाको चौथो बैठकमा आइपुग्दा अव संसद सहज रुपमा चल्छ कि भन्ने विश्वास गरिएको छ । पहिलो बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने अभ्यास भएपनि तेस्रो बैठकसम्म प्रतिनिधि सभा बैठक कर्मकाण्डी मात्रै बन्यो । पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने भएपनि संसद पुर्नस्थापनाको मुद्धा उठाएका प्रचण्ड, माधव पक्षीय नेताहरुले बहिष्कार गर्नुपर्यो । नेपाली कांग्रेसले सदन नै अवरुद्ध गुर्नपर्यो । यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरोध र आलोचना रोकिएको छैन् । संसद बिघटन गर्दा सडकमा पोखिएको आक्रोश अव संसदमा पुगेको छ ।
हो जनताको आवाज बोल्ने थलो संसद अव नियमित प्रक्रियामा अघि बढ्यो भने सरकारलाई खबरदारी गर्ने र देशका कुना कुनामा भएका समस्या संसदमा उठ्ने छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुले सम्बोधन गरे । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारका उपलब्धि सुनाइरहदा र पार्टीभित्रका नेताहरु र प्रतिपक्षले सरकारको कडा आलोचना गरे । सरकारलाई समर्थन गरेको तर, प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत सरकारले सिन्को भाच्न नसकेको टिप्पणी गर्यो । संसद बिघटनदेखि कोरोना महामारीमा भएको भ्रष्टचारसम्मका आवाज संसदमा उठ्दा शीर्ष नेताहरुको कुर्सी नै खाली । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खोई ? सांसदको पनि आफनै ताल छ ।
संसद बैठकमा आयो हाजिर गर्यो भत्ता पकायो अन्त्यसम्म बस्नै परेन ? सरकारले बिजनेश नदिएका कारण संसद बैठक अझै अलमलमा छ । प्रधानमन्त्री ओली अझै प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सकिन्छ कि भन्ने दाउ खोजिरहेको आरोप राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि फेरि उठ्न थालेको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोले संसद संकटमा फेरि नपारियोस् । जनताका मुद्धा उठाउने संसदलाई बन्धक होइन खुला रुपमा बहस गर्ने थलो बनाइयोस । सार्वजनिक महत्वका बिषयले संसदमा प्रबेश पाओस् । संसदमा हिजो भएका र निरन्तरता पाइरहेका फोहोरी खेल फेरि देख्न नपरोस् ।
किसानलाई उत्तरी नाका तातोपानीबाट ल्याइएको रासायनिक मलले कति सहज बनाउला
को सांसद कति दिन गयल ? संसदमा सुनाइयो गयल हुनेको नामावली